Burmese taste - Iora: ငှက်ပျောဖူးချက်
ငှက်ပျောဖူးဝယ်ထားတာတပါတ်လောက်ရှိပါပြီ။ မအားလို့ ခုမှချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်စားရင်ကောင်းမလား၊ချက်စားရင်ကောင်းမလားဆုိုပြီးတွေးနေတာ။ သုတ်ရင်များနေမယ်ထင်လုို့ ချက်ဘဲချက်လိုက်ပါတယ်။
ဦးဆုံးအပေါ်လွှာအကြမ်းတွေကိုနုတာရောက်တဲ့ထိ တလွှာပြီးတလွှာ ခွာထုတ်ပစ်ရပါတယ်။ အဖူးလေးတွေနုတာတွေ့ ရင်လည်း ခြွေပြီးယူထားပါတယ်။ လွှာရင်းလွှာရင်း နဲ့ မကျန်သလောက်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ မလောက်မှာတော့ပူစရာမလိုပါဘူး။ သူကဒီလိုမျိုးဆုိုမနည်းပါးစပ်ထဲခွံ့ ကျွေးမှစားတာဆိုတော့လေ။ အော်..ရုံးပတေသီးကဘာမှမဆုိုင်ဘူးနော်။ ကပ်ပါသွားတာ။ တခြားဟင်းချက်နေတုန်းလှီးနေတာမို့ လို့ ပါ။
ပန်းဖူးလေးတွေကအပေါ်ကနုညံ့ပေမဲ့ အတွင်းက၀တ်ဆံတုိုင်တွေက (ပုံထဲမှာအမဲရောင်လေးတွေပါ) ကြမ်းလို့ ဖဲ့ပြီးဆွဲထုတ်ပစ်မှကောင်းပါတယ်။ အချိန်မရရင်လည်းဒီတုိုင်းထဲ့လိုက်တာပါဘဲ။ အဲဒါဆိုရင်စားရင်တော့ဖယ်ဖယ်ပစ်ရပါတယ်။ပါးစပ်ရှုပ်ပါတယ်။
ဖယ်ရင်း ခွာရင်းနဲ့ သိပ်တောင်မကျန်တော့ပါဘူး။
လူများရင်တော့နှစ်ဖူးသုံးဖူးတော့ဝယ်ရမယ်ထင်တယ်။ ပြီးရင် ခပ်ပါးပါးလှီး ရေဆေး ပြီးဆားရည်စိမ်ထားပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ဆီသတ်၊ ငြုတ်သီးမှုန့် ထဲ့၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲနဲထဲ့၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ထဲ့ပြီး မွှေးလာရင် ဆားရည်စိမ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောဖူးတွေကို အဖန်ရည်တွေထွက်သွားအောင်ညှစ်ပစ်ပြီး ဆီသတ်တဲ့ထဲထဲ့မွှေပြီး ဆားပြား၊ အချုိုမှုန့် ထဲ့ပါတယ်။ ငပိလေးကြိုက်ရင်နဲနဲလေးအောင်ထဲ့နုိုင်ပါတယ်။ ကျမကဒီနေ့ ငန်ပြာရည်နဲနဲထဲ့ပါတယ်။ ခဏလုံးပြီးရင်တော့ ဆန်မှုန့် လေးနဲနဲရေဖျော်ပြီးထဲ့ပါတယ်။ ကျမတော့အရှိန်လွန်သွားလို့ ဆန်မှုန့် နဲနဲများသွားပါတယ်။ ဆန်မှုန့် ကြိုက်တတ်ရင်တော့ အိုကေမှာပါ။ ကျမကသိပ်စေးပျစ်ပျစ်ကုိုမကြိုက်တတ်လို့ ပါ။ ဆီပြန်ရင် ချနုိုင်ပါပြီ။ ကျမတော့ ရေနဲနဲချန်ထားပါတယ်း မပျစ်သွားအောင်လို့ ပါ။ ချခါနီး အစပ်ကြိုက်လို့ ငြုတ်သီးစိမ်းခွဲထဲ့ပြီး နံနံပင်အုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပါဘဲ လွယ်ပါတယ်။
ရေဆေးထားတဲ့ငှက်ပျောဖူးရွက်လေးထဲကုို လှအောင်လို့ ခပ်ထဲ့ပါတယ်။ ခရင်းလေးနဲ့ ကော်ပြီးစားလိုက်တာခဏလေး နဲ့ စားလို့ ကုန်သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ထမင်းနဲ့ စားဘို့ ပါ။ ဒီတိုင်းလည်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်ရှင်။
ကဲ..ချစ်မိတ်ဆွေများ ရောက်တုန်းရောက်ခုိုက် သုံးဆောင်ဖြစ်အောင်သုံးဆောင်သွားပါနော်။
မှတ်ချက်..ဒီတခါတော့ထပ်လုပ်ပေးစရာမရှိတော့ first come, first နော်။ ငိုတတ်တဲ့သူတွေ စောစောလာမှစိတ်ချရမယ်နော်..း)))))
ချော April 4, 2011 at 11:57 PM
ဒီနည်းကလည်း တစ်မျိုးဘဲနော် အဲလိုတော့ ချက်မစားဖူးဘူး
ငှက်ပျောဖူးအရွက်ကြမ်းတွေကို သုပ်စားလို့ရတယ်လေ သိတယ်ဟုတ်..
ထုတ်ထုတ်လေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတယ်။ အစိမ်းသုပ်စားတယ် ဒီတစ်ခါ အိမ်ပြန်ရင် သုပ်စားမယ်း)
ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ဘက်မှာ အဲဒီငှက်ပျောဖူးအနုလေးတွေကို မုန်ညင်းပေါင်းသလို ပေါင်းစားကြသေးတယ်။ ဟင်းရည်လည်း ချက်စားတယ်။
ငှက်ပျောဖူးရွက်လေးထဲမှာ ဟင်းကိုထည့်ထားတာ သဘောကျလိုက်တာ
ချစ်ဖို့ကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာ Good Idea.
Nyi Linn Thit April 5, 2011 at 1:21 AM
wow... ဆက်တိုက်ပါပဲလား၊း)
ရုံးပတီသီးကလည်း ဓါတ်ပုံထဲ ပါချင်လို့ထင်တယ်၊ ငှက်ပျောဖူးဘေးကို အတင်းလိုက်ကပ်နေတား)၊ ငှက်ပျောဖူးချက်ကို ငှက်ပျော်ဖူးရွက်ထဲပြန်ထည့် ထားတဲ့ decoration လေး လှတယ်..။
Mon Petit Avatar April 5, 2011 at 1:39 AM
Humm, I have never tasted the banana bud curry, and it seems delicious!!!
Vista April 5, 2011 at 2:43 AM
rose April 5, 2011 at 12:59 PM
ငှက်ပျောဖူး တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး အစ်မအိုင်အိုရာ။ ထိုင်းဆိုင် သွားရင်တော့ တွေ့ တွေ့ နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်စား ရမယ် မသိလို့ မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး။ အခု အစ်မ ပြောတဲ့ နည်းလေး တွေ့မှ ၀ယ်ပြီး ချက်စားကြည့်ဦးမယ်။ ကျေးဇူး။
iora April 5, 2011 at 3:52 PM
iora April 5, 2011 at 4:18 PM
ငှက်ပျောဖူးကုိုတော့အစိမ်းသုပ်ရော၊ ပြုတ်သုပ်ရောလုပ်စားဖြစ်ပေမဲ့ အဖတ်ကြမ်းတွေကုိုတော့ တခါမှသုပ်မစားဖူးဘူး။ ပေါင်းတာလည်းမစားဖူးဘူး။ ကောင်းမှာပါ သူ့ အရသာကုိုကြိုက်ပြီးသားဆုိုတော့လေ။
ထင်သလိုတွေလျှောက်လုပ်ထားတာချောရေ.. အဲဒီလိုဘဲchef တွေကလည်းထဲ့ကြပြုကြတယ်မှုတ်လား...
ဆက်တုိုက်ဘဲ..ဆက်တိုက်ဘဲ..ဘယ်ချိန်ပြန်ပျောက်ဦးမယ်သိနုိုင်တာမဟုတ်..ရုံးပတေသီးကုိုပေးပါလိုက်တာလေ..သူ့ စီက color လေးပါသွားအောင်လို့ .....
If you try, I think, you will like it.
စားချင်ရင်စားပါ။ စား စား။ ကုိုယ်တုို့ က ဧည့်မျှော်နေတာ။
ဒါဆုိုတခါလောက်စမ်းကြည့်ပါလား။ အိအောင်ပြုတ်ပြီးသုပ်စားလည်းကောင်းတယ်။ လက်ဖက်လို အစိမ်းသုပ်စားလည်းကောင်းတယ်သိလား။
ThuHninSee April 5, 2011 at 9:35 PM
အိမ်မှာ ငါးကြင်းအသားတွေကို အတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးပြီးငှက်ပျောဖူးနဲ့ ချက်တယ်။ စားချင်လိုက်တာ။ မွန်ဟင်း။
Iora April 5, 2011 at 11:24 PM
အဲဒါလည်းကောင်းမှာဘဲနော်။ မစားဖူးဘူးအဲလို။ ကုိုယ်လည်းအဲဒီမွန်ဟင်းစားချင်လိုက်တာ။
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါနော်။ နောက်လည်း အားရင်လာလည်ဘို့ ဖိတ်ပါရစေ။
Shinlay April 6, 2011 at 8:09 AM
Iora April 6, 2011 at 11:36 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ ဟုိုမှာတုန်းက အဲဒီလောက်တန်ဘိုးထားရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ အမြဲလိုလို အလကားရနေတာကုိုး။ ကုိုယ်လည်း မြန်မာ နဲ့ ရုိုးရာဟင်းတွေကြိုက်တယ်။
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ ရှင်လေးစီကုို မကြာခဏလာဖတ်ပါတယ်။
မီးမီးငယ် August 18, 2012 at 4:53 PM